Avibase - Toro-lalaon'ny vorona an'izao tontolo izao
Ireo lisitra ireo dia mifototra amin'ny fampahalalana tsara indrindra azo atao amin'izao fotoana izao. Izy ireo dia mifototra amin'ny karazan-loharano maro samihafa izay narahako nandritra ny taona maro, ary nohavaozina tsy tapaka. Faly aho manolotra ireo lisitry ny lisitra ireo ho mpanamory fiaramanidina, saingy iharan'ny tsy fahatokisan-tena izy ireo. Raha mahita fahadisoana ianao dia aza misalasala .
Ny lisitry ny vorona ahodin-tsolika eto amin'izao tontolo izao dia ampahany amin'ny Avibase sy ny vorona amin'ny rohy mankany amin'izao tontolo izao, izay noforonin'i Denis Lepage, ary natolotry ny Bird Studies Canada, izay mpiara-miasa amin'ny Birdlife International.
Apetraho amin'ny sari-tany ny marika iray
Hizaha ny sari-tany
Asehoy lisitra: Firenena / faritra / faritra Ampidiro ireo fanjakana / faritany Asehoy ny habaka rehetra
Avibase no notsidihina 308,695,181 nanomboka tamin'ny 24 jiona 2003. © Denis Lepage | Politika fiarovana fiainan'olona